Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Laser Dahab ah
Golden Laser ayaa ixtiraami doonta oo ilaalin doonta arimahaaga gaarka ah. Waan ilaalin doonnaa macluumaad kasta oo aad bixiso markii aad booqato degelkan.
01) Xog ururin
Websaydhkan, waad ku raaxeysan kartaa adeeg kasta oo la bixiyo, sida amar-bixinta, helitaanka caawimaad, soo-dejinta faylasha iyo nashaadaadka ka-qaybgalayaasha. Kahor intaadan halkaa marin, waxaa lagaa rabaa inaad buuxiso macluumaadkaaga shaqsiyeed oo aan kuugu soo bandhigi karno xulasho habboon oo aan kuu sii deyn karno abaalmarinta haddii ay jiraan.
Waxaan bilaa sabab u cusbooneysiineynaa adeegeena iyo badeecadeena (oo ay ku jiraan diiwaangelinta) si loo daboolo baahiyahaaga. Hadday suurogal tahay, waxaan u baahan doonnaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shirkaddaada, khibrad ku saabsan alaabtayada iyo habka loola xiriiro.
02) Isticmaalka Macluumaadka
Dhammaan macluumaadkaaga shabakadan waxay ku jiri doonaan difaac adag. Macluumaadka, Laser-keena Golden wuxuu awoodi doonaa adeeggaaga wanaagsan oo dhakhso badan. Xaaladaha qaarkood, waxaan ku wargalin karnaa cilmi-baaristaadii ugu dambeysay ee suuqa iyo macluumaadka alaabta.
03) Xakamaynta macluumaadka
Waxaa waajib nagu ah inaan ilaalino wixii macluumaad ah ee aan kaa soo aruurino, oo ay ku jiraan jawaab celinta ama siyaabo kale. Taasi waa in la yiraahdo marka laga reebo Golden Laser ma jirto cid saddexaad oo ku raaxeysan doonta macluumaadkaaga.
Adoo uruurinaya macluumaadkaaga shabakada isla markaana isku daraya xogta dhinac saddexaad, waxaan kugula talin doonaa alaabada iyo adeegga ugu fiican.
Xusuusin: Xidhiidhada kale ee ku jira degelkan, kaliya waxay kuugu adeegi doonaan sida ugu fudud oo waxay kaa saari doonaan degelkan, taas oo macnaheedu yahay Laser-kayga Dahabka ahi mas'uuliyad kama saari doono waxqabadyadaada iyo macluumaadka bogagga kale. Marka wixii qoraal ah ee ku saabsan xiriiriyeyaasha websaydhka qaybta saddexaad way ka baxsan doonaan dokumentigan qarsoodiga ah.
04) Amniga Xogta
Waxaan qorsheynay inaan ilaalino macluumaadkaaga oo dhameystiran, kana fogaano luminta, si xun u isticmaalka, booqashada aan la fasaxin, daadinta, rabshadaha iyo qas. Dhammaan xogta ku jirta adeegeena waxaa ilaaliya gidaarrada, iyo lambarka sirta ah.
Waxaan ku faraxsanahay inaan wax ka bedelno macluumaadkaaga haddii aad u baahan tahay. Wax ka beddelka ka dib, waxaan kuugu soo diri doonnaa faahfaahinta saxda ah email ahaan jeeggaaga.
05) Isticmaalka Kukiyada
Kukiyada ayaa ah qaybo xog ah oo la abuuray markii aad booqato degelkeena oo ku keydsan diiwaanka cookie ee kombiyuutarkaaga. Weligood ma burburin doonaan ama akhriyi doonaan xogta kombiyuutarkaaga. Kukiyada waxay xifdiyaan ereygaaga sirta ah oo ay ka baaraandegaan muuqaalka kaas oo kugu soo dedejin doona ka-habeyntaada websaydhkayaga xiga. Sidoo kale waad diidi kartaa cookies haddii aadan rabin.
06) Ku dhawaaq wax ka beddelka
Tarjumaadda bayaankan iyo isticmaalka websaydhka waxaa iska leh Golden Laser. Haddii siyaasaddan asturnaanta si uun loo beddelo, waxaan ku dhejin doonnaa nooc la cusbooneysiiyay boggan sidoo kale waxaan ku xusi doonnaa taariikhda salka boggan. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxaan ku dhejin doonnaa calaamadda la sameyn karo ee shabakadda inay kugu soo wargeliso.
Wixii khilaaf ah ee ka dhasha bayaankan ama adeegsiga websaydhka ayaa u hogaansami doona sharciga u dhigma ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha.